National Democratic Front - NDF (Burma): မယ်သရောထာ သဘောတူညီချက်
ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖြစ်ကြသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား၊ ချင်းတိုင်းရင်းသား၊ ကချင်
တိုင်းရင်းသား၊ ကရင်တိုင်းရင်းသား၊ ကရင်နီတိုင်းရင်းသား၊ ကယန်းတိုင်းရင်းသား၊ မွန်တိုင်းရင်းသား၊ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား၊ ပလောင်တိုင်းရင်းသား၊ လားဟူတိုင်းရင်းသား၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားနှင့် “၀” တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များသည် အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူမျိုးအသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုကြလျက် ကော်သူးလေပြည်နယ်၊ မယ်သရောထာ၌ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၇) ရက်နေ့မှ (၁၄) ရက်နေ့ထိကျင်းပသော နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးတွင် စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အထက်ဖော်ပြခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးခေါင်းဆောင် ကိုယ်စားလှယ်များသည်
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီး၌ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အကြေအလည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကြပြီးနောက်
အောက်ပါအချက်များကို တညီတညွတ်တည်း သဘောတူချမှတ်ခဲ့ကြသည်။
၁။ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်
(က) စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းပြီး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန်၊
(ဂ) လူမျိုးတိုင်း တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးရရှိရန်၊
၂။ န၀တအမျိုးသားညီလာခံနှင့်ပတ်သက်သော သဘောတူညီချက်
လက်ရှိ န၀တဦးစီးကျင်းပနေဆဲဖြစ်သော အတုအယောင် အမျိုးသားညီလာခံသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက်ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအတွက် အခွင့်အရေးလုံးဝရနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အတွက်၎င်း၊ န၀တအမျိုးသားညီလာခံကို ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသား
လူမျိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက “လုံးဝ” အသိအမှတ်မပြုကြောင်းနှင့် ၎င်းညီလာခံကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရန် သဘောတူကြသည်။
၃။ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သော သဘောတူညီချက်
ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ဆုံးဖြတ်ထောက်ခံထားသည်သာမက ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သဘောတူထားသော သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက သဘောတူလက်ခံသည်။
ထိုသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွင် မဒတ၏ (UNLD) (PDF) နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ
ပါဝင်သော အင်အားစု၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုနှင့် န၀တစစ်အုပ်စုအင်အားစု သုံးစုတို့ ပါဝင်စေရမည်။
၄။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့်ပတ်သက်သော သဘောတူညီချက်
အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရှိပြီး အမျိုးသားပြည်နယ်များ စုပေါင်းပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက တညီတညွတ်တည်းသဘောတူကြပါသည်။
၅။ စီးပွားရေးမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်သော သဘောတူညီချက်
စီးပွားရေးမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်သော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ကျင့်သုံးရန်နှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီး
မြှုပ်နှံမှုကို ဖိတ်ခေါ်သွားရန် ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက သဘောတူသည်။
သို့သော် န၀တအုပ်ချုပ်နေစဉ် ကာလအတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းသည် စစ်
အာဏာရှင်စနစ်နှင့် စစ်အုပ်စု၏အကျိုးစီးပွားကိုသာဖြစ်စေပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ပြည်သူများအဖို့ အကျိုးလုံးဝမရှိသည့်အပြင် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုဒဏ်ကို ပိုမိုခံစားလာရသည့်အတွက် န၀တစစ်အုပ်စုနှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပါအ၀င် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်သည်။
၆။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သော သဘောတူညီချက်
မူးယစ်ဆေးဝါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု အပါအ၀င် လုပ်ငန်းအားလုံး ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက တညီတညွတ်တည်းသဘောတူသည်။
၇။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့်ပတ်သက်သော သဘောတူညီချက်
န၀တစစ်အုပ်စုဖြုတ်ချရေးနှင့် အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲ၊ သံတမန်
တိုက်ပွဲ၊ လူထုတိုက်ပွဲအပါအ၀င် ဘက်ပေါင်းစုံမှ တိုးမြှင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်း
သား နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက သဘောတူသည်။
ထိုသို့တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့်
တန်းတူရည်တူလက်တွဲ၍ အမျိုးသားအခွင့်အရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီအခွင့်
အရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ တပြိုင်နက်တည်း စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရန်
ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက တညီတညွတ်တည်း
၈။ ASEAN နှင့်ပတ်သက်သော သဘောတူညီချက်န၀တအုပ်ချုပ်နေသောကာလအတွင်း မြန်မာပြည်အား ASEAN အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်ခံခြင်းကိုအတတ်နိုင်ဆုံး ဆိုင်းငံ့ထားပေးပါရန် ASEAN သို့ ပန်ကြားလွှာပေးပို့သွားရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက သဘောတူသည်။
၉။ တပ်ပေါင်းစုနှင့်ပတ်သက်သော သဘောတူညီချက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ပြည်လုံးဆိုင်ရာ တပ်ဦးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စည်းရုံးရေး စသည်တို့ကို ပိုမိုခိုင်မာလာအောင် ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး
တည်ဆောက်ကြရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက တညီတညွတ်
၁၀။ ပြန်လည်ဆုံစည်းကြရန် သဘောတူညီချက်မယ်သရောထာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီး၏ ရလဒ်များကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း အကောင်အထည်ဖော်သွားရန်နှင့် အနည်းဆုံး တနှစ်လျှင် တကြိမ်၊ စုံစုံညီညီ ဆုံစည်းကြရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက တညီတညွတ်တည်း သဘောတူကြသည်။
၁။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်သန်းလေး၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)
၂။ ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာ၊ ပအိုဝ့်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (PPLO)
၃။ ဗိုလ်မှူးကြီးမဟာဆန်း၊ “၀”အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (WNO)
၄။ ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းပေါင်း၊ “၀”ပြည်နယ်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP)
၅။ မိုင်အိုက်ဖုန်း၊ ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF)
၆။ ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ဆိုင်း၊ ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)
၇။ ခိုင်မြတ်ကျော်၊ ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များအစည်းအရုံး (AASYC)
၈။ ဘီကြာအူး၊ လားဟူဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (LDF)
၉။ နိုင်ဟံသာ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)
၁၀။ ခိုင်စိုးနိုင်အောင်၊ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)
၁၁။ ခွန်းနားရု၊ ကယန်းပြည်သစ်ပါတီ (KNLP)
၁၂။ စ၀်အွတ်ကျေးသီ၊ ညီညွတ်သောရှမ်းပြည်တော်လှန်ရေးတပ်မတော် (SURA)
၁၃။ ဆလိုင်းရွှေခါး၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF)
၁၄။ ခွန်ဟုမ်၊ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး (SDU)
၁၅။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘိုမြ၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)
(၁) စ၀်စန်းရောင်ဝှေ (၂) နော်လှဇာဘင်ဆင် (၃) ခွန်းမားကိုဘန်း
ETHNIC NATIONALITIES SEMINAR
(Mae Tha Raw Hta)
Mae Tha Raw Hta Agreement
We, leaders of Arakanese, Chin, Kachin, Karen Karenni, Mon, Pa-O, Palaung, Lahu, Shan and Wa ethnic nationalities, representing the various organizations as well as the nationalities, attended the seminar held from January7to 14, 1997 at Mae Tha Raw Hta in Kawthoolei.
We, leaders of nationalities mentioned above, after frank and cordial discussions in depth, have agreed upon the following terms.
1. Agreement relating to Political Aims
(a) To dismantle the military dictatorship and establish peace in the country;
(b) To practice the democratic political system;
(c) To achieve the rights of equality and self-determination for each and every nationality;
(d) To establishafederal union.
2. Agreement Concerning the SLORC’s National Convention
The sham National Convention being held by the SLORC, presently, is for the perpetuation of military dictatorship. Since absolutely no rights will be gained for the ethnic nationalities, we, the Ethnic Nationalities Seminar, do not in any way recognize the SLORC’s National Convention and agree to oppose it.
3. Agreement Regarding Tri-partite Dialogue
We, the Ethnic Nationalities Seminar, accept the tri-partite dialogue agreed to by Daw Aung San Suu Kyi, and called for by the resolutions of the UN and international organizations. The tri-partite dialogue must include three forces, namely the force composed of the National Democratic Front (NDF), Union Nationalities League for Democracy (UNLD), Peace and Democratic Front (PDF) and other ethnic nationalities, the Pro-democracy forces led by Daw Aung San Suu Kyi, and the SLORC military clique.
4. Agreement Relating to Federal Union
We, the Ethnic Nationalities Seminar, unanimously agree to establishagenuine federal union composed of national states having the full rights of national equality and self-determination.
5. Agreement Relating to Economic Policy
Regarding the economic policy, we, the Ethnic Nationalities Seminar, agree to practiceamarket economic system and invite foreign investments.
However, as foreign investments, at present, are benefiting the SLORC military dictatorship only and increasing its oppressive power, we strongly object to them.
6. Agreement Relating to Narcotic Drugs
We, the Ethnic Nationalities Seminar, unanimously agree to cooperate with international narcotic drug eradication organizations for the eradication of the entire business of narcotic drugs, including cultivation, production and trafficking.
7. Agreement Regarding Pro-democracy Forces
We, the Ethnic Nationalities Seminar, agree to raise the fight, on all sides, in the fields of politics, diplomacy and people’s action, for the dismantling of the SLORC military dictatorship.
In this struggle, we agree also to join hands with pro-democracy forces led by Daw Aung San Suu Kyi, and act unitedly and simultaneously for the achievement of rights of the nationalities as well as democratic rights.
Moreover, we acknowledge the National League for Democracy (NLD) led by Daw Aung San Suu Kyi as the winner of 1990 general election an accordance with the true will of the people and democratic process, we fully support all acts of opposition against the SLORC, by it.
8. Agreement Relating to ASEAN
We, the Ethnic Nationalities Seminar, agree to send letters to ASEAN, requesting it to delay, indefinitely, acceptance of Burma under the SLORC, asamember of the organization.
9. Agreement on Reunion
We, the Ethnic Nationalities Seminar, agree to maintain and implement the results of the seminar and to haveareunion at least onceayear.
1. (Gen. Aung Than Lay)Karen National Progressive Party
2. (Col. Khun Okker)Pa-O People’s Liberation Organization
3. (Col Maha Sean)Wa National Organization
4. (Col Sai Pao Sing)United Wa State Party
5. (Mai Aik Phone)Palaung State Liberation Front
6. (Col. Zau Seng)Kachin Independent Organization
7. (Khing Myat Kyaw)All Araken Students and youth congress
8. (B. Kya Oo)Lahu Democratic Front
9. (Nai Han Tha)New Mon State Party
10. (Khing Soe Naing Aung)Araken Liberation Party
11. (Khun Na Ruh)Kayan New Land Party
12. (Sao Oac Kesi)Shan United Revolutionary Army
13. (Slai Shwe Kha)Chin National Front
14. (Khun Home)Shan Democratic Union
15. (Gen Saw Bo Mya)Karen National Union
16. Individual Delegates
1. Chao-Tzang Yawnghwe 2. Naw Louish Benson 3. Khun Marko Ban
Posted by National Democratic Front - NDF at 10:31 AM